Infinity Blade II, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Ny sabotsy maraina dia fotoana mety hisintomana lalao na fangatahana maimaim-poana ary araraoty araraoty ireo roa andro ho avy hankafizanao azy. Ary raha avy amin'ny saga Infinity Blade, tsara kokoa. Araka ny hitanao amin'ny lohatenin'ity lahatsoratra ity, ny lalao asehonay anao anio fa halefa maimaimpoana dia ny Infinity Blade II, ny tapany faharoa amin'ny tantara nahazo ny loka Infinity Blade, ary izany koa manana ampahatelony. Ity lalao tIzy io dia manana vidiny mahazatra ao amin'ny App Store 6,99 euro.
Ny faharesen'ny Mpanjaka God dia mitondra ny fisehoan'ny maherifo tsy ampoizina izay hanery antsika hahita ireo tsiambaratelo miafina ao amin'ny Infinity Blade. Ao amin'ireo kinova voalohany, ny lalao dia tsy nisy karazana fividianana in-app, lojika raha jerena fa tsy maimaim-poana ity lalao ity, saingy nandritra ny taona maro, ity lalao ity dia tsy tena maoderina, ny developer dia nanampy fitaovam-piadiana, fiadiana ary ozona vaovao azontsika atao mampiasa fividianana rindrambaiko amin'ny fampiharana. Mba hahazoana valisoa sy fanavaozana ny fiadianay, tsy mila hijerena akory dia afaka mandray anjara amin'ireo fanamby manerantany amin'ny alàlan'ny ClashMob isika.
Na eo aza ny sary tsara izay atolotray antsika ity lalao ity, Infinity Blade II dia mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra ao amin'ilay iPhone 4 sy iPad 2 tafiditra ao, satria mitaky farafaharatsiny mba hiasa ny iOS 6 na avo kokoa. Ny zavatra takiny dia mihoatra ny 1 GB ny habaka amin'ny fitaovantsika hahafahana mankafy ity lalao mahafinaritra ity, lalao amin'ny Espaniôla, noho izany ny sakana amin'ny fiteny dia tsy ho fialantsiny amin'ny tsy filalaovana Infinity Blade II. Ny isa salan'isa amin'ity lalao ity misy tsikera maherin'ny 150.000 dia kintana 4,5.
Raha toa ka toa mitentina 6,99 euro ny fisie lalao dia tsindrio ilay izy hanokatra ny App Store hijerena raha mbola misy maimaim-poana maimaim-poana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Infinity Blade II, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Tim Cook dia mampitaha ny zava-misy mitombo amin'ny revolisiona finday